Indonesia in Focus: Ukubhema lokubulala izigidi zabantu
Journey Unfinished (380)
(Ingxenye amathathu namashumi ayisishiyagalombili), Depok, West Java, Indonesia, October 13, 2015, 8:37 pm)
Umbhalo Line Metro TV 10 November 2015 futhi ibike ukuthi ngo 2030 kwakukhona zaseChina eziyizigidi ezimbili abafa unyaka ngamunye ngenxa imikhuba ukubhema (kagwayi). Ngesikhathi esifanayo Indonesian kazwelonke inkonzo ithelevishini yomphakathi kwangasese manje ukukhangisa Ministry Health Indonesia iyabonisa kukhona ukufa umdlavuza umphimbo zabangela uyakuthanda ukubhema, futhi ukukhumbuza umphakathi hhayi ukuba isisulu olandelayo.
Inkinga kukagwayi, okubangela izinkinga zempilo kubantu manje abe yinkinga yembulunga yonke, hhayi nje inkinga labantu aminyene ezifana China, Indonesia, India, futhi abaningi emazweni ampofu kakhulu emhlabeni ezifana Bangladesh, kodwa futhi hit amazwe athuthukile eYurophu nakwezinye izingxenye zwekazi, qinisa up imithetho yendawo, kanjalo amazwe amaningi ziye zathi ugwayi ukukhangisa ku media ezifana ithelevishini, ngisho zidinga uhlu ukuthola imiphumela impilo ukubhema ugwayi emaphaketheni, kanye Ukusabalala merperluas endaweni non-ukubhema, ezifana e izithuthi zomphakathi, nezinye izindawo zomphakathi. Noma kunjalo, inani ugwayi abayimilutha siyakhula futhi inani lokufa okubangelwa ugwayi nakho kuyanda. Akukona nje kuphela uhulumeni kanye namalungu ephalamende ukwenza imithetho ukuze unciphise isikhala for ukuthuthukiswa the Imboni kagwayi, kodwa futhi abaholi benkolo baye esikhishwe Fatwa (umthetho yenkolo), ezifana Muhammadiyah e Indonesia okusekelwe isiphakamiso Al Quran kanye Sunnah futhi ubufakazi besayensi ukukhipha Fatwa ukuthi Ukubhema haraam. Isimo sengqondo esifanayo futhi uzwakalise ukuthi izazi ezivelele Saudi Arabia, Egypt, Pakistan kanye nezinye izazi eziningi. Ngisho noma a isilaleli of Radio and Television Rodja ucele ukuthi benza tauziahnya Ustad (inkulumo) bonke iphendulwe ukubhema haram esekelwe isiphakamiso Al Quran, Sunnah futhi izazi ukuthi ukulawula. Ustad Abu Yahya Badrussalam, Lc, ochwepheshe hadith (isiko) university iziqu Islam e Madinah, Saudi Arabia ukubhema melontakkan kuyinto haraam. Ngokusho kwakhe, ngokusekelwe impikiswano Qur'an kanye Sunnah, futhi ubufakazi besayensi ukubhema esigabeni ukuzibulala, ngokuba kungalimaza impilo obhemayo, okuyinto kancane kungabangela ukufa. Yingakho, wathi Abu Yahya, ukubhema esigabeni izenzo yokungalaleli, okuyinto izono lokuyenza izisindo kwelizayo. I banobufakazi enokwehla, nginabangane, ngokulinganayo imithandazo kaningi eyodwa mosque, futhi ngemva komthandazo ngenkathi ehamba ekhaya, wangitshela ukuthi selokhu ngineminyaka esemncane wayemthanda ukuba ubheme. By the age of umhlalaphansi bekulokhu kabili Mr. ecaleni inhliziyo surgery, ihlaselwa yisifo senhliziyo ngenxa ukubhema eminyakeni embalwa edlule yaphathwa yisifo somdlavuza ebuchosheni futhi kufanele wahlinzwa ubuchopho bakhe, futhi yayithatha izinyanga eziningana, ngo ubuchopho isigaba ezohlinzwa ngenxa yokuthi wayenomdlavuza sesibili ukuphila kwakhe akakwazanga basindiswe. Abasebasha umfowabo Inombolo My amahlanu (out of 10 zakubo) Bambang Widodo washona ngo-2006 ngemuva abaphethwe umdlavuza wamaphaphu baphathwe Pasar Rebo Hospital. Jakarta Timur, yena ngokudla isisindo
In 2030 China 3.5 Million / Year Killed Cigarettes Okwamanje eChina, abantu abangaba izigidi 1.2 ngonyaka ufe ngenxa izindaba ezihlobene ukubhema Cishe 9.500 abantu bafa minyaka ngenxa ukungcola komoya London Hidayatullah.com-A umbiko omusha ubikezela ukuthi ukubhema bazonibulala abantu million 3.5 ngonyaka China kule minyaka engamashumi amabili. Lo mbiko lenziwa Chinese futhi ochwepheshe omhlaba kanye ezikhishwe ngoLwesine, nje kwezinsuku ngaphambi kosuku esabekwa World Health Organisation for China lokuvala ukubhema endlini ezindaweni zomphakathi. Akunakwenzeka China ukuhlangabezana usuku ngeSonto, omunye izimo eziningana ephoqelelwe lapho China bamukelwa ukuba ilungu WHO eminyakeni emihlanu edlule. Isibikezelo 2030 uqhathaniswa sibalo samanje lapho abantu mayelana 1.2 million ngonyaka ufe ngenxa izindaba ezihlobene ukubhema. Lo mbiko uthi ku 2030, ukubhema kuzokwenza amaphesenti angu-25 abafa kuzo zonke izingozi, iqhathaniswa ephakathi kuka 2 no 3 engamaphesenti angu owafa of AIDS. [Voan / hidayatullah.com] Izinkulungwane Die Ibhayisikobho Ukubhema e Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Amalungu Ad Monitoring Hendriyani ukubhema emhlabeni esikoleni, wathi, abantu abangaba yizinkulungwane 200 e Indonesia wabulawa ukugula okubangelwa ukubhema. Hendriyani wathi, Indonesia yilona lizwe anenani eliphakeme wesithathu ababhemayo asebenzayo in the world. Kulinganiselwa ukuthi kunezinhlobo million 66 ababhemayo abakhuthele Indonesia, futhi 3.9 million kubo kukhona izingane ezineminyaka engu-10 kuya ku-14. Iphesenti ababhemayo wesilisa babengamaphesenti angu-67,4. Ngenxa ababhemayo kuleli zwe isibalo esiphezulu ababhemayo nogwayi owabulala inqwaba. "Njalo ngonyaka abantu abangaba yizinkulungwane 200 e Indonesia wabulawa ukugula okubangelwa ukubhema," esho ngesikhathi Conference Press kanye ukuthunyelwa Monitoring gwayi Around Schools emadolobheni amahlanu, e Jakarta, ngoMsombuluko (15/6). Okuxakayo, ukwanda ukubhema Indonesia yilona eliphezulu ukuwedlula wonke e-mpumalanga Asia. Abantu Isilinganiso Indonesia umusi 12.4 kagwayi ngosuku. Khonamanjalo, i-Indonesia Child lantern idatha Lisda Sundari eqoqwe impilo inhlangano emhlabeni Organization United Nations Organization (WHO) ithi ukuthi ukusetshenziswa kukagwayi yabulala abantu abayizigidi ezingu-100 ngekhulu lama-20. Uma lokhu ukusetshenziswa izitayela uqhubeke, ugwayi bazonibulala amaphesenti angu-80 ngokufa kwabantu abayizigidi eziyinkulungwane nekhulu lama-21 uyofika iyokwenzeka emazweni asathuthuka. Washington, (AFP) .- Imboni kagwayi uthole US $ 7,000 for ngamunye abantu abangaphezu kwezigidi eziyisithupha bafa minyaka yonke kusukela ukubhema nezifo ezihlobene, ngokusho impilo nokumela iqembu World Lung Foundation (WLF). Ngonyaka odlule, ngaphezu 5.8 trillion ugwayi kudliwe, efana 2013, ngenxa anda ugwayi ukusetshenziswa China offset ukwehla kwamanye amazwe, ngokusho kombiko eliholwa WLF. Embikweni global noGwayi Atlas, lo WLF kanye American Cancer Society ithi ngo-2013, unyaka odlule idatha atholakalayo, inzuzo ye Imboni kagwayi zafinyelela ngaphezu $ 44 billion. Khonamanjalo, abantu abayizigidi 6.3 bafa kusukela ukubhema izifo ezihlobene, okulingana inzuzo of $ 7,000 for ukufa ngayinye okubangelwa ugwayi. Lo mbiko uthi uma le mikhuba iqhubeka, a billion abantu bayokufa ngenxa ukubhema futhi ukuchayeka nogwayi lokhu leminyaka. Ngaphezu abangela umdlavuza wamaphaphu, okuyinto evame akubulali, ugwayi ehola eyingozi ngenxa yochungechunge oluthile lwezinto ezenzeke nezinye izifo. Lona isizathu esiyinhloko ukuthi empeleni akunakugwenywa emhlabeni yokufa ngaphambi kwesikhathi kusuka kwezimo ezimbi kakhulu ezingalapheki, ezifana nesifo senhliziyo, isifo sohlangothi kanye high blood pressure. Amazwe amaningi emhlabeni wonke ziye umkhankaso umthetho anti-ugwayi, kodwa noGwayi Atlas yathola ukuthi amaphesenti angu-10 kuphela ezakhamuzi zezwe ohlanganisa ukuvinjelwa olunzulu ukukhangisa, ukugqugquzelwa kanye uxhaso ugwayi, 16 kuphela wamaphesenti agodliwe non-ukubhema lonke ngamunye. (VOA) Qaphela intando yakho nesirhawu ababhemayo, ngoba ukubhema kungabangela pencandunya uzohlupheka kokubili kuleli zwe futhi ngesikhathi esizayo?
China uxwayisa US phezu South China Sea
Ubabuyisele island in the South China Sea njengoba umthombo ukungezwani zesifunda.
China waxwayisa United States ngoLwesihlanu, October 9, ukuhamba eduze iziqhingi South China Sea lapho abazisho ubukhosi.
Abezindaba Various libike ukuthi US Navy ucabangela ukuba phaka imikhumbi lesi siqhingi yokufakelwa the South China Sea.
Umkhumbi kuhlelelwe ukungena ensimini ka-12 nautical miles yinoma Beijing njengoba amanzi abo indawo.
Esabela kulokhu nokulungiselela, okhulumela uMnyango wezangaPhandle e Beijing athi ngeke avumele noma izwe ukuze ifohlele amanzi ayo indawo.
Reuters, okhulumela inkonzo wathi: "We ukukhumbuza wonke abathintekayo hhayi ukuthatha izinyathelo inkanuko futhi uthathe ngobuqotho isimo sengqondo wemfanelo maqondana ukuthula kwesifunda nokuzinza."
The US and kubangane bawo, kuhlanganise Japan, ngibiza Beijing ukuyeka ukwakhiwa iziqhingi yokufakelwa e South China Sea, okuyinto okubalulekile in ukwanda izingxabano phakathi Beijing futhi Washington wombuso.
Nakuba UMengameli Xi Jinping uthe akazimisele zingakuqeda yini ukuhlonyiswa ngezikhali siqhingi, i umhlaziyi kanye Washington futhi US kusho izikhulu China uye wakha izindawo lempi kwakukhona.
Beijing phikelela amalungelo reclamation South China Sea
China ukwakha evulekile lwesithathu Somlilo Cross Reef Island, e-South China Sea.
Uhulumeni Chinese ibuyelele ilungelo labo bacele endaweni kuphikiswana eSouth China Sea.
UNgqongqoshe wezangaPhandle Chinese Wang Yi, uthe project kubalulekile ukuqhubeka, naphezu ngenyanga edlule ukuthi Beijing uye wayeka reclamation.
"Lezi amaphrojekthi ezibalulekile sisebenzela eziqhingini zethu siqu South China Sea. Thina asizange kwamanye amazwe njengoba amatshe," kusho Wang Yi.
"Bathi ihloselwe ukuthuthukisa izinga lempilo amasosha wamisa khona kanye ukugcwaliseka umthwalo njengoba izwe elikhulu kunawo wonke esifundeni," usho kanje.
Satellite izithombe ezithathwe kamuva wabonisa izisebenzi zokwakha ekwakheni evulekile lwesithathu Somlilo Cross Reef Island Reef.
Ngokuhamba kwesikhathi yamuva iziphathimandla Chinese ukwakha zezindiza kanye yokuxhumana eziqhingini e South China Sea, okukholelwa izosetshenziswa ngamasosha Chinese.
President of China, Xi Jinping, uzohambela US ngesonto elilandelayo futhi izicelo Chinese in the South China Sea kungenzeka zidingidwe lapho wahlangana nezikhulu eziphezulu Washington.